दसैंको खानपिनले तपाईंको स्वास्थ्यमा परेको उल्लेखनीय असर के हो ? | Bishow Nath Kharel
दसैंको खानपिनले तपाईंको स्वास्थ्यमा परेको उल्लेखनीय असर के हो ?
३ वर्षअघि खसीको मासु मज्जाले खाइयो, लगत्तै पखाला चल्न थाल्यो, औषधि नखाइ भएन, औषधि खाएपछि मासु बार्नुपर्ने, त्यो दसैं अरूले मासु खाए मैले औषधि खाएर बिताउनुपर्‍यो।
– दीपक गौतम, गायक
बास भयो ट्वाइलेटछेउको पालमा, यो घटना घट्यो २०५८ सालमा। शौचालय थियो गहिरो, पेटमा आयो बाढी-पहिरो, शौच गर्न जानुपर्‍यो बारम्बार, दोहोरियो यही काण्ड लगातार, पातलो दिसा लाग्यो तारन्तार, त्यसपछि बुझें गलत भएछ आहारबिहार, अचेल खाने बेलामा सचेत छु।
– अर्जुन केआर संग्रौला, आरजे/कलाकार
बैंसमा त ढुंगा पनि चपाइएको र पचाइएको हो। छरछिमेक, साथीभाइ, काकाबाउ, मावली, आफन्त जता गयो उतै रेडमिट र खल्पी खाइएकै हो, अबचाहिँ शरीरले पनि सन्तुलित आहार खोज्न थालेजस्तो लाग्न थालेको छ।
– नारद खतिवडा, हास्यकलाकार
चार वर्षअघि खानपिन र बाइक हकाइले पाँच-सात दिन लगातार बिरामी भइयो। घर गइएको थियो, शुद्ध दही, घिउ र रोटी खाइयो। त्रिवेणीमा पुगेर माछा पनि लडाइयो, त्यसपछि यसरी थला परियो कि उठ्न निकै दिन लाग्यो।
– हेमन्त शर्मा, गायक
दसैंको खानपिनले राम्रो असर पर्ला जस्तो लाग्दैन है मलाई त।
– गौरव पहारी, नायक
एकपटक दसैंमा राँगाको मासु खानुपर्‍यो। त्यो घटना बिर्सनलायक छ। यति नमज्जाले वान्ता भयो कि सम्झन पनि सक्दिनँ।
– मञ्जु महत, गायिका
दसैंको खाना स्वादिलो हुन्छ तर स्वस्थकर हुँदैन, ग्यास्ट्रिक, कन्सिटपेसन अनि ओभरवेट।
– बाबुराम दाहाल, गीतकार
खानपिनले गर्दा मोटाइन्छ, जता जाँदा पनि खानैपर्ने बाध्यता, नखाँदा पनि ठूलो मान्छे भयो भनेर बात लाग्छ, मोटोपनकै टेन्सन हुन्छ।
– सुमित खड्का, गायक
प्रोटिन बढी हुनाले दसैंमा गर्लफ्रेन्डलाई जतिबेला पनि साथमै राखौं, नछोडौं जस्तो लाग्छ।
– उकेश दाहाल, निर्देशक
चिल्लो र फ्याटले विशेषगरी पेट गडबड हुन्छ दीर्घकालीन समस्या चाहिँ फ्याट, युरिक एसिड आदि बढ्ने हो, जसको परिणामले योपालिको दसैंमा केही खान देलाजस्तो छैन।
– केपी पाठक, निर्देशक
दसैं भनेर धेरै खाँदिनँ, मेरो डाइट रुटिनमा गडबड हुन्छ। आमाले बनाएको खसीको पक्कु लाखौंमा एक हुन्छ, त्यसैले पक्कुचाहिँ खानैपर्छ। ब्यालेन्स खाना खाने भएकाले हुनसक्छ, मेरो स्वास्थ्यमा त्यति असर परेको छैन्।
– निल डेभिड कटवाल, हेयरस्टाइलिस्ट
मोटाउनुका साथसाथै शरिरको तौल बढेर भद्दा भएको अनुभूति हुन्छ, दसैंको खानपान थेग्न गाह्रो हुन्छ।
– गोविन्द शाही, नायक/निर्माता
शारीरिक अभ्यासभन्दा खाना टन्न मेरो त, ५ किलो तौल बढेर हिँड्न पनि गाह्रो हुने भएछ, त्यसकारण यसपटक अलि कम खान्छु, बिहान-बिहान रनिङ गर्छु। दसैंमा त खानपिनले गारै पार्छ।
– सुशील पोखरेल, कलाकार/निर्माता
खाना त जताततै, मासु-मासु मात्र, नखाई धर पाइन्न। प्रेसर र वेट बढेर हैरान। खानपिनले पुर्‍याएको नकारात्मक असरका बारेमा चाहिँ नबोलौं, गोप्य नै राखौं। ट्राफिकले उल्टो खेदो गर्छन् फेरि।
– भीषण मुकारुङ, गायक
दसैंमा २-३ किलो तौल बढ्ने निश्चित हो। दसैंको खानपानले टे्रनिङ गर्न अलि पावर बढ्छ। मेहनत गर्नुपर्छ शरिर घटाउन।
– दीपक विष्ट, खेलाडी
असरको त कुरै नगरौं, यस विषयमा मैले एउटा पुस्तक नै निकालेको छु।
– धीरज तन्डुकार, इभेन्ट म्यानेजर/कोरियोग्राफर
खातापिता मोटाको जमाना रहेन अब, त्यसैले धेरैभन्दा कम खानमै हित छ, तर दसैंको बिदामा आराम र त्यसमाथिको खानाले मोटाइने निश्चित छ, खाना कन्ट्रोल गर्न नसक्दाको क्षण सम्झन पनि मन लाग्दैन।
– निता ढुंगाना, नायिका
दसैं-तिहारमा खाइने मासुमा चिल्लो बढी हुन्छ, त्यसले पेट दुख्छ र डायरिया हुन्छ, त्यसैले सकेसम्म खानेकुरामा होसियार हुन थालेकी छु।
– निशा सुनार, गायिका
बोसो भएको मासु र रक्सीले कोलस्ट्रोल र प्रेसर बढाएर हैरान हुन्छ नि ।
– सुरेन्द्र केसी, मुलासाग
म खाना विशेष तरिकाले लिन्छु किनभने सन्तुलित रूपमा खाना खाँदा आउने मज्जा छुट्टै छ।
– राजु सिंह, संगीतकार
मासु खान्नभन्दा पनि खानुपर्ने बाध्यता आइपर्छ दसैंमा। असरको त कुरै नगरौं।
– शुभेच्छा थापा, नायिका
कुनै समय रक्सी र मासुले ह्यांग भएको सम्झना छ तर अहिले मासु र रक्सी दुवै छोडेको पनि १० महिना नाघिसक्यो, त्यसकारण यसपटक खासै असर नपर्ला।
– राज तिमल्सिना, नायक
म भेज भएका कारण त्यस्तो असर पर्ने गरेर केही खादिनँ, त्यही भएर पनि उल्लेखनिय असर थाहा नभएको हो।
– शोभिता सिम्खडा, नायिका
विशेष त दसैंको नौरथा लागेपछि नै चहल पहल सुरु हुन्छ, दसैंको बेला घरमा विशेश गरेर खानपानमा व्यस्त हुने भएकाले शारिरिक अभ्यास पनि गर्न पाइँदैन। बसेर खाने काम मात्र हुँदा गाह्रो हुन्छ, तर अहिलेसम्म स्वास्थ्यमा असर नै परेर अस्पताल पुग्नुपरेको छैन्।
– बिपिन किरण, गीतकार
अहिले म अमेरिकामा छु, यहाँ त खोइ खासै दसैंनै हुँदो रहेनछ, खै खानपानको असरको के कुरा गर्नु ?
– कृष्ण धारावासी, साहित्यकार
दसैं भन्ने वित्तिकै परिवारका सबै सदस्य बसेर मिठो-मिठो खाने कुरा आउँछ, हामी चाहिनेभन्दा धेरै खान्छौं, चिल्लो-पिरो, मासु-माछा, रक्सी धेरै खान्छौं। पेट टन्न हुन्छ, ढुस्स हुन्छ, बिग्रन्छ अनि मोटाइन्छ पनि, खाना खान मन नभए पनि जबरजस्ती धेरै खानुपर्छ, टेन्सन हुन्छ, अपच भएर हाजमोला खानुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ।
– शुभेच्छा भडेल, फेसन डिजाइनर
दसैंको खानामा अलि बढी नै चिल्लो पिरो हुने भएकाले छिट्टै जिउ लाग्छ मोटोपन बढ्छ, नायिकालाई ज्यान बढ्दा पिर त पर्ने नै भयो।
– ऋचा शर्मा, नायिका
कसरी पिउने मदिरा
चाडपर्व, उत्सव एवं रमाइलो जमघटहरूमा मदिरा पिउने चलन संसारभर छ। स्वास्थ्यका हिसाबले मदिरा सेवन हानिकारक मानिन्छ। यद्यपि सही समयमा, सही तरिकाले, सही मात्रामा पिउने हो भने यसले स्वास्थ्यमा त्यति नकारात्मक असर गर्दैन। बरु, विभिन्न अनुसन्धानहरूले के देखाएका छन् भने स्वस्थ्य वयस्क व्यक्तिलाई हल्का मदिरापानले फाइदा पुर्‍याउँछ। सन् २००५ मा अमेरिकाको कृषि विभागको पोषण निर्देशिकामा मदिराको मात्रा उल्लेख गरिएको छ। जसअन्र्तगत आधा बोतल बियर, एक सानो गिलास वाइन, एक पेग रक्सीलाई ‘हल्का मदिरापान’ भनिएको छ।
के हो मदिरा ?
अल्कोहलयुक्त पेयपदार्थ हो, मदिरा। डिस्टिलेसन गरी तयार पारिएका सबै पेय यसैअन्तर्गत पर्छन्। जस्तो- रम, भोड्का, हि्वस्की, ब्रान्डी, जिन, बियर, वाइन आदि। यसलाई पनि तीन भागमा विभाजन गरिएको छ- ब्य्रुड, फर्मेटेड तथा डिस्टिल। वियरलाई ब्य्रुडअन्र्तगत राखिन्छ भने वाइन, छ्याङ, तोङ्वा तथा तारी फर्मेटेड वेभरेजमा पर्छन्। यस्तै डिस्टिल वेभरजमा हि्वस्की, रम, जीन, ब्रान्डी, भोड्का तथा टकिला आउँछन्। यिनीहरूको प्रकृतिमा मात्र विविधता छैन, पिउने शैली पनि फरक छ।
वाइन, वियर र मदिरामा अल्कोहलको मात्रा, बनाउने विधि, कच्चा पदार्थ बेग्ला-बेग्लै हुन्छन्। त्यसैले यसले पार्ने प्रभावमा पनि एकरूपता हुँदैन। वियरमा ५, वाइनमा १२ तथा रक्सीमा ४० प्रतिशतको हाराहारीमा अल्कोहल पाइन्छ। मदिरा पिएपछि हामी रोमाञ्चित महसुस गर्छौ।
मर्यादित ढंगले पिउने
मदिराको प्रकृति अनुसार त्यसलाई पिउने विधिमा पनि विविधता छ। भुक्तभोगीहरू भन्छन्- ‘मदिरा पिउनु पनि एउटा कला हो।’ हुन पनि मदिरालाई कसरी, कहाँ, कस्तो ग्लासमा, के सँग पिउने ? जान्नुपर्छ। मदिरालाई उचित तरिकाले पिउन जानिएन भने त्यसको असली स्वाद पाइँदैन।
फुर्सदिलो समयमा साथीभाइसँग जमघट गरेर मदिरा पिउन सकिन्छ। कार्यव्यस्तताका कारण दिनभरको थकान मेट्न पनि मदिराको साथ लिन सकिन्छ। यद्यपि तनाव एवं मनमा नकारात्मक विचार आइरहेका बेला मदिरा पिउनु उपयुक्त मानिंदैन। मदिरा पिउँदा मन प्रफुल्ल हुनुपर्छ।
हामीमा एउटा भ्रम छ- मदिरा जति धेरै पिउन सक्यो, उति मजा हुन्छ। यो गलत हो। मदिरालाई सही मात्रामा पिउँदा त्यसबाट छुट्टै आनन्द उठाउन सकिन्छ। त्यसैले आफ्नो शारीरिक क्षमताअनुसार कति पिउने भन्ने कुरा निर्धारण गर्नुपर्छ। मदिरा पिउनुअघि नै आफ्नो क्षमता निर्धारण गरेर बस्नु राम्रो हुन्छ।
खाली पेटमा मदिरा पिउँदा स्वास्थ्यमा त्यसको सोझो असर पर्छ। पिउने कार्यक्रम छ भने, त्यसको केही घण्टाअघि हल्का खानेकुरा खानुपर्छ जसमा अण्डा, चीज, उसिनेको आलु, दुई टेबल चम्चा ओलिभ एवं सनफ्लावर तेलका साथै अन्य नुनिला खानेकुरा उपयुक्त हुन्छन्। त्यसैगरी पर्याप्त पानी पिउनु पर्छ।
कुन मदिरा कसरी पिउने, त्यसको पनि आ-आफ्नै शैली छ। जाडो र गर्मीमा पिउने मदिरा एकै खालका हुँदैनन्। जिन गर्मी मौसममा पिइन्छ भने, रम जाडोमा। मौसम अनुकूल मदिरा छनौट गर्न सकियो भने त्यसको असली स्वाद लिन सकिन्छ।
मदिरा पिउने विधि
रम ः सामान्यतः रम तीन प्रकारको हुन्छ- डार्क, ह्वाइट र गोल्डेन। ह्वाइट रम ककटेलमा प्रयोग गरिन्छ। यसलाई सोडा, पानी वा पाइनापल जुससँग मिक्स गरेर पिउनु ठीक हुन्छ। यसैगरी डार्क रमलाई कोक, तातो पानी तथा महसँग पिउन सकिन्छ। रम पिउनका लागि हाई बल ग्लासको व्यवस्था गर्नुपर्छ। डार्क रमसँग स्न्याक्सका रूपमा रातो मासु खानु हुँदैन।
टकिला ः मात्राको हिसाबले थोरै भए पनि टकिला एकै पटकमा पिइन्छ। यसलाई सुटर ग्लासमा राखेर पिउनुपर्छ। टकिला पिउने छुटै तरिका छ- एउटा हातमा ग्लास र अर्को हातमा कागती तथा थोरै नुन लिनुपर्छ। टकिला घुट्क्याइसकेपछि हातको नुन चाटेर कागतीको टुक्रा चपाउनुपर्छ। यो मेक्सिकोको राष्ट्रिय पेय हो।
हि्वस्की ः कलर, फ्लेवर र स्वादको संगम हो- हि्वस्की। जाडो सिजनमा हि्वस्की पिउनु ठीक हुन्छ। यसको असली स्वाद लिने हो भने निट पिउनुपर्छ। आइसको केही टुक्रा राखेर पिउँदा हि्वस्कीको स्वाद दोब्बर हुन्छ। यसैगरी पानी, सोडा एवं कोकाकोला हालेर पनि ह्वीस्की पिउन सकिन्छ। यससँग सेतो मासु, माछा वा सुँगुरको मासु स्न्याक्सका रूपमा खान सकिन्छ।
जिन ः गर्मी सिजनमा जिन पिउनु उपयुक्त मानिन्छ। कागतीका स-साना स्लाइस हालेर जिन पिउनुपर्छ। यसमा लेमोनेट, टनिक तथा सोडा मिश्रण गर्न सकिन्छ। जिन इङ्ल्यान्ड तथा हल्यान्डको राष्ट्रिय पेय हो। जिनसँग मासुभन्दा पनि भेजिटेवल स्न्याक्स एवं सलाद खानु राम्रो हुन्छ।
भोड्का ः सेतो स्पि्रटको राजा भनिन्छ भोड्कालाई। यसका केही विशेषता छन्। भोड्का जाडो र गर्मी दुवै सिजनमा पिउन सकिन्छ अनि सबै किसिमका ककटेलमा यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ। किनभने यो स्वादरहित, प्रभावरहित र रंगहीन हुन्छ। यसलाई सुटरमा पिइन्छ अर्थात् एकैचोटीमा घुट्क्याउँदा यसको असली स्वाद लिन सकिन्छ। भोड्कामा जुस, कोक, स्प्राइट, जिन्जर एल वा पानी मिसाएर पिउनुपर्छ।
ब्रान्डी ः ब्रान्डीलाई जाडो सिजनमा निट पिइन्छ। ब्रान्डी तातो पानी र महको घोलसँग पनि पिउन सकिन्छ। ब्रान्डी पिउन बलुन ग्लास चाहिन्छ।
( मधुशाला फ्यामिली रेष्टुराँमा कार्यरत बारटेन्डर पासतेम्बा शेर्पासँग शिव मुखियाले गरेको कुराकानीमा आधारित )
– हेनरी फोर्थ डुडगनन हेरिटेज कोन्याक विश्वको सवैभन्दा महँगो मदिरा हो। आकर्षक हीराजडित तथा हातैले बनाइएको विशेष किसिमको बोतलमा उपलब्ध रक्सीको २० लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी पर्छ।
– द म्याकलन १९२६, डलमोर ६२, सिंगल हाइल्यान्ड तथा ग्लोन फिडिक १९३७ बढी रुचाइएका महँगा मदिरा हुन्।
– सर विस्टन चर्चिल विश्वमा धेरै पिउनेमध्येका एक थिए।
– इंल्यान्डका पिटर जे ड्वेडसवेलले सन् १९७५ फरवरी ७ मा छोटो अवधिमा धेरै मदिरा पिएर विश्व कीर्तिमान बनाएका थिए। उनले ६ सेकेन्डमा दुई लिटर मदिरा पिएका थिए।
– न्यू कम्बरल्यान्ड, पेन्सिलभियाका स्टेभन पेट्रोसिनोले १ दशमलव ३ सेकेन्डमा १ लिटर मदिरा पिएर विश्व कीर्तिमान बनाएका थिए। १९७७ जून २२ मा जिन्जरब्रेड मेन पवमा आयोजित कार्यक्रममा उनले उक्त कीर्तिमान बनाएका हुन्।
– धेरैजसो तरकारी र लगभग सबै फलमा मदिराको केही न केही अंश हुन्छ।
– सामान्यतः चिनी बनाउने क्रममा उखु क्रसिङ गर्दा निस्कने खुदो -मोलासिस) लाई फर्मेन्टेसन गरी हि्वस्की बनाइन्छ। रम उखुको रसबाट बन्छ भने ब्रान्डी र वाइन अंगुरको जुसबाट बन्छ। भोड्का आलुबाट वनाइन्छ। यद्यपि दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा हि्वस्कीका साथै रम र भोड्का पनि मोलासिसवाटै बनाइन्छ। गहुँबाट जिन बनाइन्छ, जसमा जुनिपर बेरी नामको जडीवुटी अनिवार्य मिश्रण गरिएको हुन्छ।
– स्कटल्यान्डमा वनेको स्कच हि्वस्की निकै प्रख्यात छ। त्यहाँ ढड्याएर उमारेको जौलाई सुकाएर पिठो बनाइन्छ। त्यसैलाई फर्मेन्टेसन गरी स्पिरिट वनाएर विशेष किसिमको काठको भाँडोमा राखेर समुन्द्रमा डुबाइन्छ। समुन्द्रमा राखेको अवधिका आधारमा त्यस्तो स्कच हि्वस्कीको वर्गीकरण गरिन्छ।
– एक दशकअघि जोनी वाकर कम्पनीले गरेको विश्वव्यापी सर्वेक्षणले प्रत्येक सेकेन्डमा तीनवटा रेड लेबल बोतल बिक्री हुने तथ्य बाहिर ल्याएको थियो।
– अमेरिकामा प्रत्येक वर्ष २१ वर्षमुनिका ५ हजारले रक्सीकै कारण ज्यान गुमाउँछन्, जसमा विषाक्त मदिरा सेवन, कार दुर्घटना, आत्महत्या आदि छन्।
– आर्थिक सर्वेक्षण २०६९/७० अनुसार नेपालमा १ करोड ५७ लाख ४३ हजार लिटर हल्का पेयपदार्थ, ३९ लाख २४ हजार लिटर बियर, १ करोड ३० लाख ५६ हजार लिटर मदिरा उत्पादन हुन्छ। उक्त सर्वेक्षण अनुसार बियरको बर्सेनि १० प्रतिशत तथा रक्सीको १५ प्रतिशत बजार विस्तार भैरहेको छ।
– हामीले पिएको धेरैजसो मदिरा कार्बनडाइअस्क्साइडमा परिवर्तन भएर, १० प्रतिशतभन्दा कम पिसाब, पसिना र सासबाट बाहिर निस्कन्छ।
– विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय एवं स्थानीय एकीकृत विकास समाज नेपालले गरेको सर्वेक्षणअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाका वयस्कहरूमध्ये ४८ प्रतिशतले नियमित मदिरा सेवन गर्छन्। यसरी मदिरा सेवन गर्नेहरुमा ६३ प्रतिशत पुरुष तथा ३३ प्रतिशत महिला छन्।
– बाल सरोकार केन्द्र -सिविन)ले गरेको अध्ययन अनुसार औसतमा ग्रामीण भेगमा प्रतिदिन घरेलु मदिरा उत्पादन गरिने एउटा घरवाट ३३ माना अर्थात् १६ दशमलव ५ लिटर मदिरा उत्पादन हुन्छ, जसमध्ये दुईतिहाइ बिक्री हुन्छ भने अरू व्यक्तिगत प्रयोजनमा खर्च हुन्छ।
– चिकित्सकहरूका अनुसार एउटा स्वास्थ्य कलेजोमा ७ देखि ९ दशमलव ४ ग्राम प्रतिघण्टा मदिरा पचाउने क्षमता हुन्छ। यदि कलेजको पचाउने गतिभन्दा मदिरा सेवनको गति तीव्र भए मदिराको असर बढी भएर कलेजोलाई क्षति पुग्छ।
– २ सय ५० मिलिलिटर वियर पिउँदा १ सय २२ क्यालोरी प्राप्त हुन्छ। १ सय मिलिलिटर रेड वाइन पिउँदा ८२ र त्यती नै मात्रामा ह्वाइट वाइन पिउँदा ७५ क्यालोरी प्राप्त हुन्छ। ३० मिलिलिटर हि्वस्की पिउँदा ९१ क्यालोरी प्राप्त हुन्छ भने त्यति नै रम पिउँदा ९८ क्यालोरी प्राप्त हुन्छ। जीन पिउँदा ८४ तथा ब्रान्डी पिउँदा ९८ क्यालोरी प्राप्त हुन्छ।
Source : http://www.ekantipur.com/saptahik/article/?id=12326